Hodges University Admissions »Natao ho an'ny olon-dehibe miasa
Ny fanombohan'ny tantaranao ihany
Nanampy ireo mpianatra izahay
Tahaka anao ihany no nahatanterahanao ny nofinofin'izy ireo
Nandritra ny 30 taona mahery!
Tahaka ny nahatratraranao ny nofinofisin'izy ireo
Nandritra ny 30 taona lasa
Amboary ny traikefanao
Raiso an-tanana ny ho avinao anio!
Hanao ahoana ny # MyHodgesStory?
Fampahalalana an'i Covid
Degre amin'ny Internet
Fiofanana ho an'ny mpiasa
Hihaona amin'i Dr. John Meyer, filohan'ny Oniversiten'i Hodges ary mpianatra nahazo diplaoma indroa Hodges
#MyHodgesStory dia mety manana toko mitovy amin'ny anao. Nanomboka ny asako tamin'ny naha mekanika fiara sy tompona orinasa aho. Rehefa afaka 20 taona teo ho eo dia nanapa-kevitra aho fa tonga ny fotoana hiovana. Nifindra tany Florida izahay mianakavy ary niaraka tamin'ny famporisihan'izy ireo dia nanomboka ny diako tany Hodges (College Iraisampirenena tamin'izany) ary nahazo diplaoma tamin'ny mari-pahaizana licence sy Master. Miasa sy mamelom-bady aman-janaka, miampy ny fandehanana any am-pianarana dia mila fifehezan-tena be, saingy fantatro fa amin'ny farany dia mendrika izany rehetra izany.
Amin'ny maha filoha ahy dia ny fizarana diplaoma no andro tiako indrindra. Tena mahafa-po ny mahita ny fientanam-po amin'ny endrik'ireo nahazo diplaoma tamin'izy ireo niampita ny lampihazo. Mpianatra mihoatra ny 10,000 no nankalaza ny fizarana diplaoma tao anatin'ny 30 taona lasa. Fa na dia tsara aza ny andro fizarana diplaoma dia ny tanjon'ny mpampianatra sy ny mpiasa ao amin'ny Oniversiten'i Hodges dia ny fanomanana ireo mpianatsika, tsy ny voalohany ihany, fa mandritra ny andro aorian'ny fizarana diplaoma.
Hodges University dia toerana manokana izay ahafahan'ny mpianatsika mahatratra ny tanjon'ny fanabeazana sy ny asany. Io no toerana ahafahanao “Mijanona eo akaikinao ary mandehana lavitra."
Hodges U laharana faha-2! - 2021 Colleges tsara indrindra any Florida amin'ny alàlan'ny Score Salary
Ivon-toerana bakalorea: 10 Bakalorea an-tserasera mora indrindra amin'ny famolavolana sary ho an'ny 2020
Colleges tsara indrindra: 2020 Colleges an-tserasera tsara indrindra any Florida
Ny sekoly tsara indrindra: Ny mari-pahaizana licence an-tserasera 25 tsara indrindra amin'ny programa momba ny heloka bevava amin'ny cyber
Hevitra tsara indrindra amin'ny oniversite: Fandaharam-pahaizana licence an-tserasera 25 ambony amin'ny famolavolana sary
Ny sekoly tsara indrindra: 2020 Degree momba ny lozisialy momba ny lozisialy an-tserasera farany tsara indrindra
Sekolin'i Paralegal tsara indrindra amin'ny Internet: Fandaharam-pianarana diplaoma ambony indrindra 10 an-tserasera
Online U: Kolej an-tserasera mora vidy indrindra amin'ny taona 2019 ho an'ny diplaoma amin'ny lalàna
Vondrona fanabeazana SR: 2020 Colleges an-tserasera tsara indrindra any Florida
Fandaharana ambony amin'ny Internet ihany
Inona no mampiavaka an'i Hodges
Hodges University, mifantoka amin'ny ianao. Ny programa diplaoma rehetra, ny fomba fianarana rehetra, ny profesora tsirairay ary ny mpikambana ao amin'ny ekipa. Natokana ho an'ny manome aingam-panahy anao hahatratra ny fanabeazana mendrika ho an'ny fiainana sy ny asa tadiavinao.
fandaharam-pianarana natao hamolavolana anao hanomboka ny asanao Andro iray!
Nankatoavin'ny 5 samihafa Fikambanana fankatoavana.
Fanondroana ho a Fikambanana Hispanika ny Fikambanan'ny kolejy sy oniversite Hispanika - Hablamos Español
Anjerimanontolon'i Hodges Ny tahan'ny fahombiazan'ny asa dia 93%.
Nomena anarana hoeCollege tsara indrindra 40 any Florida".
Miaramila / miaramila antitra Campus misy Ivotoerana Vet natokana.
atao hoe Miaramila tsara indrindra 2018-2020.
Oniversite tsy mitady tombom-barotra.
Isam-bolana Course Start Daty.
Laharana toy ny Sekoly azo antoka ambony.
Campus ara-batana in both Naples ary Fort Myers
Kilasy iray isam-bolana Endrika mifantoka hyper raha mamela Fisoratana anarana feno na tapa-potoana
30 Taona Manompo amin'ny fampianarana ambony mpianatra
Mora ny mahita ny fandaharam-pianarana marina.
Anglisy ho fiteny faharoa
Fiofanana ho an'ny mpanara-maso voalohany
Ny zava-misy fotsiny
Fampianarana sy fiofanana matihanina
Ovay izao tontolo izao ho an'ny taranaka ho avy
Fandaharam-pitsaboana ambony indrindra
Safidio ny Hodges BSN hamolavola ny fahaiza-mitaiza mila fahombiazana manomboka amin'ny andro voalohany
Ho avy tsy ho ela! Hodges Dental Hygiene Programme dia hanome ny fanabeazana ilaina mba hitombo eo amin'ny sehatry ny fitadiavana avo lenta an'ny Hygiene Dental! Araka ny Career Onestop, ny Dental assisting dia andrasana hitombo 23% amin'ny 2026 any Florida. Anisan'ny voalohany. Raha mitady asa hiara-maniry aminao ianao,…
Serivisy fitsaboana vonjy taitra (EMS) - Programme paramedic
Vitao ny fiofanana Paramedika miaraka amin'ireo programa momba ny serivisy vonjy maika.
Fototry ny fanampiana nify
Ampiharo Androany! Ny Hodges Connect Foundation of Dental Assistant Programme dia hanome ny fototra ilaina hanombohana amin'ny sehatry ny fangatahana be an'ny Dental Assistant! Araka ny Career Onestop, ny Dental assisting dia andrasana hitombo 23% amin'ny 2026 any Florida. Topimaso ny fandaharana Ity programa ity dia natao hahalalana ny olona ho avy…
Fandaharana momba ny siansa momba ny fahasalamana
Mahazoa fahaiza-manao sy fiofanana hifantoka amin'ny fikarakarana ny marary sy ny fikarohana.
Laharana eo amin'ny tsara indrindra!
Andraikitra enti-mody an-tapitrisany dolara
Ny asa an-trano voalohany nataon'i Michelle Spitzer tao Hodges dia drafitra fandraharahana izay nanjary a hevitra fandraharahana an-tapitrisany dolara! Inona no hataonao #MyHodgesStory ho?
Ny mpianatra rehetra izay efa nametra-panontaniana ny amin'ny maha-azo ampiharina ny anjaran'ny kilasy dia mbola tsy nihaona tamin'i Michelle Spitzer.
Manomboka amin'ny tetikasa kilasy tsotra, Spitzer dia naka drafitra fandraharahana namboarina tamin'ny fiandohan'ny fianarany tao amin'ny Hodges University ary nanova izany ho franchise farany ambony an'ny MaidPro ao amin'ny firenena.
Iray aminy fitantanana orinasa Tonga mpampianatra azy mihitsy aza ireo mpampianatra, nanome fanohanana ara-pianarana sy ara-moraly rehefa niasa Spitzer nahavita ny fianarany ary niara-nanomboka ny orinasany manokana.
Raha afaka miresaka mivantana amin'ny mpianatra tsy mahazo antoka momba ny fikatsahana fampianarana ambony izy? "Ovao ny fiainanao amin'ny fampiasam-bola ho anao," hoy izy. “Mendrika izany ianao!”
Hodges 'amin'ny fangatahana fangatahana
Mianara mifampiresaka tahaka ny Pro miaraka amin'ny diplaoman'ny fifandraisana amin'ny matihanina.
Associate of Arts amin'ny fampianarana ankapobeny
Mamorona ny lalanao manokana miaraka amin'ny diplaoma amin'ny fianarana ankapobeny.
Mahazoa ny Anglisy ho toy ny fiteny faharoa (ESL) fanamarinana anio.
Torohevitra momba ny fahasalamana ara-tsaina
CACREP Fandaharana momba ny torohevitra momba ny fahasalamana ara-tsaina nahazo alalana.
Raiso ny diplaomanao momba ny fitantanan-draharahan'ny orinasa ao amin'ny Sekolin'ny orinasa lehibe.
Atombohy anio ny # MyHodgesStory
Daty fanombohana manaraka
Fivorian'ny fampahalalana PTA
Raiso ny dingana voalohany mankany amin'ny asa ara-pahasalamana mahafa-po anao amin'ny maha mpanampy anao amin'ny fitsaboana ara-batana Ianaro ny fomba ahafahanao manomboka ao amin'ny programa mpanampy amin'ny fitsaboana ara-batana CAPTE nahazo fankasitrahana androany. Liana amin'ny maha…
4:30 hariva - 5:30 hariva
Saika ary 4501 Colonial Blvd, Building U, Room U361 Fort Myers, Florida 33966, Room U361
Fampianarana bakalorea momba ny siansa amin'ny fitsaboana (BSN)
Sekoly fampahalalana momba ny mari-pahaizana licence (BSN) manatevin-daharana ny laharan'ny Heroes Hodges! Ny fandaharam-pianarana bakalorea an'ny Hodges University ao amin'ny oniversite ho an'ny mpitsabo mpanampy (BSN) dia manome fotoana manokana ho an'ny mpianatra mianatra sy mekanisma ho an'ny tenany manokana…
5:30 hariva - 6:30 hariva
Fananganana U ao amin'ny efitrano 209 na Virtual
Mihainoa avy amin'ny mpianatra Hodges U
Hodges dia traikefa nahafinaritra. Tsy afaka mangataka andro ianao. Manana mpampianatra manokana sy be fitiavana ary be fandavan-tena ianao izay manome izany rehetra izany. Mahatalanjona ny tontolon'ny fianarana. Mahatsapa ho tonga soa ianao ary te hianatra. Tsy terena ny fanabeazana ary tiana ny rehetra. Miaraka aminao ny mpampianatra amin'ny alàlan'ny tsara sy ny ratsy ary ampahafantaro anao fa olona ianao. Ezaka ekipa ary rafitra mpanohana lehibe mandritry ny taona. Nampianatra ahy i Hodges mba hazoto kokoa sy hanolo-tena amin'ny zavatra rehetra ataoko.
Nahafinaritra ahy ny lafiny an-tserasera. Io no nahafahako nandeha tany am-pianarana rehefa niasa manontolo andro ary reny tokan-tena. Ny fitantanana ny asa dia azo tantanana ary tsy mampino ireo mpampianatra. Tena hanome soso-kevitra amin'ny hafa ny oniversiten'i Hodges aho.
Ny University Hodge dia sekoly nahagaga nanatrika. Nianatra tamina fotoam-panafody ho an'ny tapa-potoana aho, nifamadika nandroso nandritra ny dimy taona lasa, nandritra ny asako manontolo andro. Raha nitady kilasy hanatrehana ahy aho ary very hevitra hoe iza no kilasy sahaza indrindra amin'ny diplaomako, sendra mpiasan'ny Hodges natokana iray aho izay nanamora ny fomba sy tsy nanaintaina. Andriamatoa Jeanette Colon dia andriamanitra. Manokana fotoana hanampiana ahy foana izy, mamaly fanontaniana ary manome antoka fa vitaina ara-potoana ny zavatra. Ny fanoloran-tena ho an'ny asany dia mahatalanjona ary ny fomba feno hafanam-po dia manampy ahy hanohy handroso hatrany. Nieritreritra ny hamita ny mari-pahaizana Master aza aho satria mampahery tokoa izy. Misaotra anao manana an'i Ramatoa Colon ho mpikambana ao aminy. Tena ankasitrahako izy sy ny asa mafy nataony.